Navoaka ny fanavaozana ny fanohanan'ny MacOS Big Sur Device | Avy amin'ny mac aho
Navoaka ny fanavaozana ny fanohanan'ny fitaovana MacOS Big Sur
Androany tolak'andro dia nanangana i Apple kinova fanavaozana vaovao ho an'ny fanohanan'ny fitaovana. Amin'io lafiny io dia tsy maintsy lazaina fa fanavaozana kely fotsiny izany fa zava-dehibe ny fametrahana azy amin'ny asa marina eo anelanelan'ny fitaovana iOS sy ny Mac.
Ny haben'ity fanavaozana ity dia tsy dia lehibe loatra ka vetivety dia hanana ireo fitaovana nohavaozina isika. Raha izany dia manamboatra olana amin'ny fanavaozana sy famerenana amin'ny laoniny ireo fitaovana miaraka amin'ny rafitra fiasan'ny iOS na iPadOS mifandray amin'ny Mac.
Tsy manana angon-drakitra marina momba ny fanatsarana nampiana an'ity kinova vaovao ity izahay saingy hita fa voavaha ny olana sasany amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny Mac sy Mac. Tsy hahagaga raha navoaka ho an'ny Amboary ny glitches eo anelanelan'ny Finder amin'ny Mac anao sy ny maodely iPhone 13 vaovao, ny mini iPad vaovao, ary ny iPad andiany faha-XNUMX.
Ny haben'ny fisie fanavaozana ity dia 195,6 MB ary tsy mila famerenana amin'ny laoniny ny solosaina raha vao tafapetraka ka tsy mila miahiahy momba ny ora fametrahana. Araka ny efa nolazainay tany am-piandohana dia fotoana fohy hanatanterahana ity fanavaozana ity ka tsara indrindra ny manavao haingana araka izay azo atao mba hisorohana ireo lesoka mety voavaha miaraka aminy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » Navoaka ny fanavaozana ny fanohanan'ny fitaovana MacOS Big Sur
Apple dia mampiroborobo ny andian-tsarimihetsika vaovao an'ny ankizy Wolfboy ary ny orinasa rehetra amin'ity horonan-tsary ity
Azonao atao ny manao "Phishing" amin'ny AirTag ary fantatr'i Apple izany